Ityoophiyaa ga’uumsa teeknooloojii Afrikaa taasisuuf hojjetamaa jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
On Nov 11, 2021 359
Finfinnee, Sadaasa 2, 2014 (FBC)- Ityoophiyaa ga’uumsa teeknooloojii Afrikaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu Ministir deettaan Ministeera Innooveeshiinii fi Teeknooloojii aadde Huuriyaa Aliin ibsaniiru.
Aadde Huuriyaan waltajjii mata duree ‘Imala Ityoophiyaa Teeknooloojiin gabbisuuf’ jedhurratti haasaa taasisaniin damee diijitaalaa teeknooloojiitin Ityoophiyaan gara fula duraatti akka imaltuuf hojiiwwan hojjetamaa jiran kaasaniiru.
Mootumman Ityoophiyaas damichaarratti xiyyeeffannoo laatee hojjechaa jiraachuu kaasaniiru.
Waltajjichaanis hoggantoonni hojii mootummaa biyyoota Afrikaarra walitti babba’aan, hoggantoonni dhaabbilee teeknooloojii, hoggantoonni dhaabbilee faayinaansii fi baankii argamuu ragaan Ministeera Innooveeshinii Teeknooloojiirra argamee ni muul’dhisa.
Naannoo keessaan eegaa!
Chaayinaan saatalaayitii LSAR jedhamu gara hawaatti furguggiste
Xiyyaara Booying Maaks 737 gara balalliitti deebisuuf qophiin duraa xumaramuu Daandii…
Baankiin Addunyaa tumsa damee Innooveeshinii fi Teeknooloojiin taasiisu cimsee kan…
Instiitiyuutichi appilikeeshinnii saaxilamummaa balaa sababa jijjiirama qilleensaan…
Chaayinaan saatalaayitii LSAR jedhamu gara hawaatti…
Xiyyaara Booying Maaks 737 gara balalliitti deebisuuf…
Baankiin Addunyaa tumsa damee Innooveeshinii fi…